Mikrobasary madrid madrid - madagasikara madagasikara any Madrid
Sticky Post By Fampiofanana mpampiofana Posted in Rent Microbus Permalink
26 / 08 / 2015 Fampiofanana mpampiofana
Microbuses luxury madrid
Sticky Post By Fampiofanana mpampiofana On 26 / 08 / 2015
Ho an'ny fanangonana sy / na hetsiky ny VIP dia manana fampandehanana minibus miaraka amin'ny tsipiriany mahavariana izay mandrakotra ny faniriana mafy indrindra.
Avereno ny famindrana ny vahiny ho fahafinaretana afa-tsy ao anatin'ny kely vitsy. Noho izany dia manana mpitsikilo manam-pahaizana ihany koa isika mba hahitana ny fitaterana hita amin'ny maha-traikefa azy manokana.
Microbuses luxury madrid Febroary 24th, 2017Fampiofanana mpampiofana
Tianao ve izany? Alefaso any amin'ny namanao izany
Fampiofanana mpampiofana Ny vondron'olona natokana ho an'ny fitaterana ireo mpandeha dia manana bus, coaches, mini-buses ary minibuses mba hividy sy hahavita manao karazana fanompoana miaraka amin'ny mpamily ary dia tsy manahy ny zava-drehetra Hizaha ny hafatra rehetra nosoratan'i Coach
Mpanazatra sy minibus Torres Bus
Puntuality, ilay mpitaingina tena be fitiavana ary ny fiara fitaterana ao anatin'ny toe-javatra tonga lafatra, mazava ho azy fa tsara ny fanompoana. Misaotra ny zava-drehetra!
Lavorary ny serivisy, niaina ny zavatra nantenainay! Ny fiaramanidina miavaka tsara! Ny mpamily dia samy lehibe! Misaotra ny zava-drehetra! Eny dia hifidy ny orinasa izahay amin'ny fotoana manaraka!
Izy ireo no orinasa fiara fitaterana tsara indrindra izay efa niasanay, nanome anay fialan-tsasatra betsaka ho an'ny zava-drehetra izy ireo ary tena mahafinaritra tokoa ny mpamily azy ireo.
Fialam-boly tsara amin'ny Coaches sy minibuses Torres. Ireo mpitaingina dia tsy dia tena sariaka loatra ary nahafantatra ny tanàna am-po, saingy tamin'ny soso-kevitr'izy ireo dia nahavita nanova ny dianay ho lasa traikefa nahafinaritra. Manoro azy ireo be dia be aho.
Pünktlichite, profesionalism ary ambonin'izany rehetra izany. Ankoatra ny fiaraha-miory amin'ny mpamily! 100% recommended 👌